Yakagadzirira kuita pati zvakare: Kutengeswa kweChampagne kuri kuseta zvinyorwa zvitsva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waini & Midzimu » Yakagadzirira kuita pati zvakare: Kutengeswa kweChampagne kuri kuseta zvinyorwa zvitsva
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • France Kuputsa Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Shopping • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Waini & Midzimu
Wagadzirira kupati zvakare: Shamba yeChampagne iri kuisa zvinyorwa zvitsva.
Rally iripano mumisika yepasirose yepasirose inogona kusimudzira kutengesa kumabhodhoro emamiriyoni e305 pasi rese muna 2021, chiyero chakapedzisira kuonekwa muna 2017.
Chikamu cheChampagne chakadzikira ingangoita 18 muzana gore rapfuura mushure mekudzikira kwe2% mu2019.
Zvichienderana nekuwedzera kwazvino, kutengesa champagne kunotarisirwa kukura ne4% gore rino, uye kuenderera mberi nemaitiro kusvika 2025.
Kutengeswa kweChampagne pakati paNdira naNyamavhuvhu kwakakwira 11.9%, kunyangwe zvichienzaniswa nenguva yakafanana mupre-denda 2019.
Zvinoenderana neveFrance champagne waini varimi vanogamuchira SGV, shambeini kutengesa kuri munzira kusvika pakakwirira kwemakore mana gore rino, nekuda kwekutengesa kunze kwenyika kuUnited States neAustralia.
Izvo zvinotengesa zvinotengesa zviri kuwedzera, zvichidzokera kumavhoriyamu ekupedzisira akaonekwa pasati paita chirwere checoronavirus chepasi rose uye kukiya kwakatevera kwakatumira kutengesa kuri kuderera, sezvo vanhu vairambidzwa kukanda mapato.
Champagne kutengesa pakati paNdira naAugust kwakakwira ingangoita 12%, kunyangwe ichienzaniswa nenguva yakafanana mu pre-denda 2019.
Panguva iyoyo, dzimba dzeChampagne dzeFrance dzakatumira mabhodhoro emamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemazana matanhatu pasi rose. Muna 297.6, zvakadaro, dunhu rakatengesa kunze mabhiriyoni makumi maviri nemana emabhodhoro, zvinoenderana nedatha kubva kuComité Champagne bhizinesi rekushambadzira. Turnover yechikamu ichi, inova indasitiri yechipiri pakukura kunze kweFrance mushure meaeronautics, yakaratidza kurasikirwa mupurofiti yemadhora mazana mapfumbamwe nemakumi masere emamiriyoni.
"Chikamu chaive chadzikira chingangoita gumi nesere muzana gore rapfuura mushure mekudzikira kwe18% muna 2," muongorori anobva kuUK-based International Wines and Spirits Record (IWSR) akaudza CNBC, achitaura nhamba dzeDrinks Market Analysis yeboka. Iye zvino, zvichienderana nekuwedzera kwezvino, kambani inotarisira shambeini kutengesa kukura ingangoita 4% gore rino, uye ramba uchienderera mberi kuburikidza ne2025.
Mafungiro eFrench General Syndicate yeChampagne Winegrowers anotonyanya kutarisira. Iri boka rinotarisira kuti rally iriko mumisika yepasirose yepasirese inogona kukurudzira kutengesa kumabhodhoro emamiriyoni e305 pasi rese muna 2021, chiyero chakapedzisira kuonekwa muna 2017.
Dzimwe nyanzvi dzinofunga kuti vanhu vangogadzirira kupati zvakare mushure mekupedza rinopfuura gore rakakiiwa.
"Kana ndichifanira kufungidzira, ndinofunga kuti vatengi vakagadzirira kupemberera kunyangwe zvinhu zvidiki muhupenyu," Natalie Pavlatos, mutauriri weUS-based Champagne Bureau, akaudza CNBC. Nguva yezororo ichiri mberi, Pavlatos anoona kuti hofisi yake iri kutogashira mishumo yekutengesa yakakwira kupfuura mwero wegore rapfuura.
"Saka tinogona kunge tichiona kwete kudzoka kune zvakajairwa asi kunyangwe kuita zviri nani kupfuura zvataive nazvo mu2019," akadaro Pavlatos.